မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 03/01/2012 - 04/01/2012
ကြော်ငြာတွေ့တုန်းက ကြည့်ချင်ခဲ့ပင်မဲ့ နောက်ပိုင်း ပိုစတာကြည့်ပြီး ဘာလို့မှန်းမသိ သိပ်မကြည့်ချင်ဖြစ်နေလို့ တင်တာကြာနေပင်မဲ့ မနေ့ကမှ JOHN CARTER သွားကြည့်ဖြစ်တယ်… အမှန်တော့ ခုနောက်ပိုင်း GRAPHIC တွေကောင်းလာတိုင်း အဲလိုကားမျိုးတွေချည်းရိုက်နေလို့ အရင်ခေတ်က ACTION ကားလိုမျိုးတွေကို ပြန်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ပါ… ဒါပေမဲ့ တကယ်သွားကြည့်လိုက်တော့ ကြည့်ရတာ တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်…
၁၈၈၁ခုနှစ်မှာ ယခင်စစ်မှုထမ်းဟောင်း ယခု သူဋ္ဌေးဖြစ်နေတဲ့ JOHN CARTER ရုတ်တရက်သေဆုံးပြီး သေတမ်းစာမှာသူ့အလောင်းကို ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အသေအခြာမှာကြားခဲ့တယ်… သူ့တူကို အမွေတွေပေးခဲ့ပြီး အိမ်ထိန်းကြီးက JOHN CARTER ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ကိုပေးကာ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုနဲ့ ထူးခြားတဲ့ သေတမ်းစာအတွက် သဲလွန်စရလို့ရညားဖတ်ခိုင်းခဲ့တယ်…
စာအုပ်ထဲကအကြောင်းတွေက ၁၈၆၈ ခုနှစ်ကို ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်… ရွှေရှာဖွေရေးလုပ်နေတဲ့ ဂျွန်ကာတာဟာ လူရိုင်းအုပ်နဲ့ ရဲလက်ကနေ သီသီလေးလွတ်မြောက်အပြီး ရွှေဂူကြီးတစ်ခုထဲရောက်သွားတယ်… အဲဒိမှာ ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်က သူ့ကို ATTACK လုပ်တာကြောင့် အဲဒိလူကို သားနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တယ်… သူ့လက်ထဲက ထူးခြားတဲ့ သတ္ထုပြားစလေးနဲ့ကို ကိုင်ကြည့်ရင်း အဲလူ မသေခင်ပြောသွားတဲ့စကားကို မတော်တဆလိုက်ရွတ်လိုက်ရင်က သူ့အတွက် ထူးဆန်းတဲ့ နေရာတွေကိုရောက်သွားစေခဲ့တယ်…
သူရောက်သွားတဲ့နေရာဟာ MARS ဂြိုလ်ဆိုတာ နောက်မှသူသိခဲ့တယ်… သူ့ရဲ့ အရိုးအနေအထားနဲ့ လေဖိအားနည်းမှုကြောင့် သူဟာအဲဒိမှာအမြင့်ကြီးကို ခုန်ပျံနိုင်တယ်… သူလက်သီးတွေက အားအရမ်းကောင်းနေတယ်… အဲဒိဂြိုလ်ပေါ်မှာလဲ အချင်းချင်းစစ်ဖြစ်သိမ်းပိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ ကြားမှာ JOHN CARTER ဟာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်… နောက်ဆုံး John Carter ဟာ Mars ဂြိုလ်ပေါ်က Helium နိုင်ငံက မင်းသမီးလေးနဲ့ သက်ဆုံးတိုင်နေတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးကာမှ ကမ္ဘာပေါ်ကို လူဆိုးတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချိန်ကစပြီး MARS ဂြိုလ်ပေါ်ကို ပြန်သွားဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အကြံအစည်ကို စခဲ့တယ်... John Carter ရဲ့ အကြံစည်မအောင်မြင်ခင် သေဆုံးသွားသလား... ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတာတော့ ဖန်သားပြင်မှာ ရှုစားလိုက်နော်...
ဇာတ်လမ်းဆက်ပြောနေရမှာရှည်ပါတယ်… အဆုံးပိုင်းလေးက TWIST လေးနဲ့ သိမ်းသွားတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်… အစပိုင်းမှာ မင်းသားကို THOR ထဲကမင်းသားလောက် COOL ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး အထင်သေးခဲ့တယ်… (အမှန်တော့ THOR ထဲကမင်းသားကိုလဲ စစကြည့်ချင်း မချောလဲ မချောဘူးထင်ခဲ့တာပဲ ကြည့်ရင်းနဲ့မှ ချောလာတာ)… ဒီမင်းသားလဲ အဲလိုပဲ… ပထမတော့ မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့ ပိန်သလိုလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း MARS ပေါ်ရောက်ပြီး မုတ်ဆိတ်ရေးရေးနဲ့ ဆံပင်အရှည်နဲ့ ဗလတွေမြင်တော့မှ အတော်ဆွဲဆောင်မှုရှိသားလို့… ဟဲ… တစ်ချက်တစ်ချက် JOHNNY DEPP နဲ့ တူတယ်လို့ခံစားရတယ်… ဒါပေမဲ့ အဲဒိမင်းသား Taylor Kitsch က Johnny Depp လောက်တော့ မချောဘူး… သူ့အရင်ပုံတွေကြည့်တော့ ဒီ John Carter လောက် သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး…
မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုအစကတည်းက စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ တခြားလဲ အထွန့်တက်မနေချင်တော့ပါဘူး… မားစ်ပေါ်မှာ လူနေလို့ရတယ်ဆိုတာကိုက မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ထင်တာပဲ… ဘာပဲပြောပြော ရုပ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ Entertainment ဖြစ်ပြီး action ခန်းတွေကလဲ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်… ဟာသလေးတွေလဲ အနည်းငယ်နှောထားတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်… John Carter ကောင်းပါမလားလို့တွေးနေသူတွေအတွက် မဗေဒါက ကြည့်သင့်တဲ့ကားလို့ ပြောချင်ပါတယ်… (ကိုယ်ပြောတာတောင် အတော် နောက်ကျနေပြီထင်ပါတယ်)
John Carter ကားဟာ IMDB မှာ 7.1/10 rating ရရှိထားပြီး... GV မှာတော့ 4/5 rating ရရှိထားပါတယ်..
Posted by mabaydar at 2:02 PM3comments :
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအကြောင်း မပြောတာကြာတော့ ခုတစ်လော သိပ်ကိုပြောချင်လာပါတယ်… ဘယ်လောက်တောင်ပြောချင်လာလဲဆိုရင် အလုပ်တွေ ကျောင်းစာတွေများတဲ့အထဲကတောင် အဲဒိအကြောင်းတွေပဲတွေးပြီး စိတ်ထဲ ဘလော့ရေးဖြစ်နေတယ်… (အမှန်တော့ ကျောင်းက Quiz တွေတန်းစီနေလို့ ကျောင်းသားထုံးစံအတိုင်း စာကလွဲလို့ ကျန်တာအကုန်လုပ်ချင်နေတာပါ)…
မဗေဒါလို ဇာတ်လမ်းတွဲ ပရိတ်သတ်တွေမှာ အကြိုက်ဆုံး စုံတွဲဇာတ်ကောင်နဲ့ အဲဒိဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား မင်းသမီးရဲ့ လိုက်ဖက်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ရင်ထဲ အသဲထဲ လှိုက်ဖိုရင်ခုန်ကြည်နူးရတာမျိုး ခံစားရတာရှိလား… တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ ပျော်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ပြန်တွေးပြီး ကြည်နူးရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေါ့… ပြီးတော့ ဘယ်နှစ်ခေါက်ပဲ ပြန်ကြည့် ပြန်ကြည့် အဲဒိ ဇာတ်ကောင်စုံတွဲနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို မရိုးတမ်း ကြည့်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စုံတွဲရှိလား…
မဗေဒါမှာတော့ ရှိတယ်… ကြည့်ဖူးသမျှ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ သူတို့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းဖြစ်စေ အဲဒိဇာတ်ကားကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်စေ မဗေဒါကို သူတို့နဲ့ထပ်တူ ကြည်နူးရင်ခုန်စေတဲ့ စုံတွဲဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းကို မျှဝေပါရစေ…
ခုပြောမဲ့အကြောင်းက ဇာတ်ကောင်စရိုက်နော်… စာရေးဆရာ ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေက သိပ်လိုက်ဖက်လွန်းတာရော… ပြီးတော့ အဲဒိဇာတ်ကောင် စရိုက်ကို သရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသား မင်းသမီး ၂ယောက်နဲ့ အဲဒိ ဇာတ်ကောင်နဲ့ သိပ်လိုက်ဖက်တာရော ၂မျိုးလုံး ပြည့်စုံတာကိုပြောတာ… (မင်းသား မင်းသမီးတူတူပဲ ဒါပေမဲ့ တခြားကားမှာ တခြားဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ဆို သူတို့စုံတွဲကို ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ်… ဒါကိုဆိုလိုတာ)….
ပထမဆုံး ထိုင်ဝမ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ စပြောမယ်…
မှတ်ချက်။ ။ ထိုင်ဝမ်းကားတွေရိုက်တဲ့ စတိုင်က ကိုရီးယားနဲ့ကွာတာတွေရှိတယ်… မလိုအပ်တဲ့ ပေါတောတော ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအခန်းတွေအရမ်းများတယ်… Very cheesy ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ညွန်းစကားလုံးတွေ အသုံးများတယ်… အဲဒါတွေကို ဖယ်ပြီး ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ လိုက်ဖက်မှုကိုပဲပြောချင်တာဖြစ်တယ်…
(Jiang Zhi Shu and Yuan Xiang Qin)
အဲဒိကားကို ဂျပန် Version ရော ကိုရီးယား Version ရော ထိုင်ဝမ် Version ရောကြည့်ပြီးပြီ… ဒါပေမဲ့ ထိုင်ဝမ်က မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးသရုပ်ဆောင်ထားတာကို ပြန်ကြည့်တိုင်း သဘောကျလို့ မျက်နှာက ပြုံးဖြီးနေမိတယ်… ဇာတ်ကောင်စရိုက်က မင်းသားက ဥာဏ်အရမ်းကောင်းပြီး ထူးချွန်တဲ့ ထိပ်ဆုံးတမ်းက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်… မင်းသမီးက စာနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ဥာဏ်တုံးပြီး ဘိတ်ချီးတန်းက… သူစိတ်ဝင်စားတာဆိုလို့ မင်းသားပဲရှိတယ်… ဥာဏ်ရည်ချင်းကလဲ ကွာဟ… ဘာအရည်အချင်းမှလဲ မရှိ… ရုပ်ရည်ကလဲ သာမာန်မိန်းကလေး… ပြောရမယ်ဆိုရင် သူလုပ်လိုက်သမျှ အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်း… ဒါတောင် မတန်မရာ သူက ထိပ်ဆုံးတန်းက ကျောင်းသားကို သွားချစ်မိလို့ ရည်းစားစာပေးတယ်… ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့ မလျော့သောဇွဲလုံ့လနဲ့ အချစ်ကြီးမားမှုကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ သူမချစ်တဲ့သိပ်အလှမ်းကွာတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုရခဲ့တယ်…
ကောင်လေးဘက်ကကြည့်တော့လဲ… သူ့ဘ၀မှာ ဘယ်အရာမဆို လွယ်လွယ်နဲ့ရတတ်လွန်းလို့ ဘ၀ကြီးမှာနေရတာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေသလိုဖြစ်နေတယ်… ပထမတော့ အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကြိုက်တဲ့ သူက အဲဒိမိန်းကလေးကို အရှုပ်လို့ထင်ခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဒီမိန်းကလေးကြောင့် သူ့ဘ၀စိုပြေလာတယ်… သူ့ဟာသူဆို ဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့သူက အဲဒိမိန်းကလေးလုပ်တဲ့ပြဿနာတွေ လိုက်ရှင်းနေရတာနဲ့ အလုပ်တစ်ခုပိုလာတယ်… ဥာဏ်တုံးတဲ့လူတွေရဲ့ ရှုထောင့်ကို သူနားလည်ပေးတတ်လာတယ်… နောက်ဆုံးသူ့အတွက် ဘေးမှာ ပြဿနာတွေလုပ်နေမဲ့ မိန်းကလေးမရှိမှာ စိုးရိမ်လာတယ်… အဲဒိမိန်းကလေး ဒုက္ခရောက်မှာ သူစိတ်ပူလာတယ်… ဒီလိုနဲ့ ဒီမိန်ကလေးဟာ သူ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတယ်…
သူတို့၂ယောက်ရဲ့ Character ကို တည်ဆောက်ပုံမှာ အရမ်း Chemistry ရှိတယ်… အစပိုင်းမှာ မင်းသမီးကို အရမ်း Annoying ဖြစ်စရာကောင်းလို့ အမြင်ကပ်ပင်မဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်ပေးလာနိုင်တယ်… အပေါ်က မှတ်ချက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း နားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ်… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒိဇာတ်ကောင် နေရာမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Joe Cheng ဟာ အရမ်းကြီး Act Cool လုပ်ပြနေစရာမလိုပဲ သဘာဝကျကျ Cool ဖြစ်နေတယ်… မင်းသမီးကို မသိမသာနဲ့ ချစ်တယ်လို့ သရုပ်ဆောင်ပြတဲ့နေရာမှာလဲ ပီပြင်တယ်… သူ့လိုခပ်အေးအေး ပုံစံမျိုးနဲ့ နောက်ဆုံးမင်းသမီးကို ချစ်သွားတဲ့အခါမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မျက်နှာအနေအထားတွေက သူနဲ့ ဒီဇာတ်ကောင်နဲ့ကိုလုံးဝလိုက်ဖက်စေတယ်… မင်းသမီး Ariel Lin ရဲ့ သရုပ်ဆောင်အားကောင်းမှုကလဲ အဲဒိကားကြည့်နေတုံးက အဲဒိမင်းသမီး အပြင်မှာလဲ ငတုံးမပဲထင်တယ်လို့ တွေးမိတယ်… နောက်ပိုင်း သူမရဲ့ တခြားကားတွေကြည့်တော့မှ သူမဟာတကယ်သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးဆိုတာလက်ခံခဲ့တယ်… (တချို့ကတော့ ဒီကားမှာ မင်းသမီးက နည်းနည်းပိုတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်… မဗေဒါအတွက်တော့ Okay တယ်)
ဒီဇာတ်ကောင်ရော သရုပ်ဆောင်တဲ့လူ၂ယောက်လုံးရဲ့ အံဝင်ခွင်ကျရှိမှုရောက ထိုင်ဝမ်ကလို့ထင်တယ်… သရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသား မင်းသမီးစုံတွဲကိုကြိုက်တာများလားဆိုပြီး… သူတို့၂ယောက်နောက်ထွက်တဲ့ Love and Bread ကိုကြည့်တော့ ISWAK လို မကြိုက်ဘူး…
အောက်က ဗွီဒီယိုလေးကြည့်သွားနော်… ဒီကားက ထွက်ထားတာကြာပြီ ဒါပေမဲ့ မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်လိုက်နော်… အိမ်မှာခွေပိုင်တောင် ၀ယ်ထားတယ်…
(Dao Ming Si and Shan Cai)
အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်စုံတွဲအကြောင်းပြောရင် သူတို့အတွဲက မဗေဒါအတွက် မပါအဖြစ်ပါ… ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို တစ်ဆုတ်နစ်နစ် စတင်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ ဒီဇာတ်ကားကစပါတယ်… သူတို့အတွဲနဲ့ တစ်ဦးချင်းစီစရိုက်ကို ဒီပိုစ့်မှာ အသေးစိတ်တင်ထားပြီးပါပြီ… ဒီကားကိုလဲ ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား ၃နိုင်ငံလုံးက ရိုက်ကူးထုတ်ဝေထားပါတယ်… တော်တော်များများကတော့ ကိုရီးယားကရိုက်မှ ဒီကားကိုသိကြတာပါ… ဒီကားကို ဘယ်နိုင်ငံကထုတ်ထုတ် ပရိတ်သတ်အကြိုက်များခဲ့ပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာရေးသူဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေက ပရိတ်သတ်တွေအတွက် နှစ်သက်ချင်စရာကောင်းနေလို့ပါပဲ… ဒီတော့ ဇာတ်ကောင်ကို ကြိုက်တာလား သရုပ်ဆောင်ကိုကြိုက်တာလားဆိုတာ ကွဲပြားစေချင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါအတွက်ကတော့ အဲဒိဇာတ်ကောင်စုံတွဲကို အရမ်းကြိုက်သလို အဲဒိနေရာမှာသရုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာ ထိုင်ဝမ်စုံတွဲ Jerry Yan နဲ့ Barbie Xu ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ…
Jerry Yan က ကျန်တဲ့ ၂နိုင်ငံက မင်းသားတွေလောက် မချောပင်မဲ့ ဒီဇာတ်ကောင်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ထင်တယ်… ဒီဇာတ်ကောင်က ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး ဘယ်သူမှ လူမထင်တဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး Character ၊ ပြီးတော့ အရပ်ရှည်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ထွားတာ၊ မိုက်ကမ်းကမ်းဖြစ်နေတာ အားလုံးက လိုက်ဖက်တယ်… အထူးသဖြင့် Jerry ရဲ့ မျက်လုံးတွေက အရမ်းစွဲဆောင်မှုရှိတယ်… ကျွန်မကြိုက်လွန်းလို့ ရူးသွပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်မအစ်မက မင်းသားရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီး စိတ်မ၀င်စားဘူး… နောက်သူပြန်ကြည့်တော့မှ အဲဒိမင်းသားစွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံသွားတယ်… မင်းသမီးလဲ ပြောစရာမရှိအောင်ကြိုက်တယ်… ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်ဖတ်တယ်… ထိုင်ဝမ်ကားကြည့်တိုင်း သူတို့အတွဲသရုပ်ဆောင်တာကိုမြင်တိုင်း ရင်ထဲမှာ သူတို့လိုပဲ လှိုက်ဖိုပြီး ရင်ခုန်တယ်… ကျန်တဲ့ ၂နိုင်ငံကရိုက်တာ အဲလိုမဖြစ်ဘူး…(Just personal opinion)…
ဒီဇာတ်ကောင်ကို ကြိုက်သလို… ဒီဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဆောင်တဲ့အထဲမှာ သူတို့ ၂ယောက်က အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်တယ်… အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ထိုင်ဝမ်ကားတင်ဆက်ပုံကိုတော့ နားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်… ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ်ကားက ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ထားတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံက ကားတွေထက်စာရင် သုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ ရုပ်ရှင် quality မကောင်းတာကိုလဲ နားလည်ပေးစေချင်တယ်... အဲဒိထဲက မင်းသမီး ခု အပြင်မှာ ယောကျာင်္းယူသွားပြီး ဆက်မရိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး...
အကြိုက်ဆုံး ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲ ဇာတ်ကောင်စုံတွဲ
မှတ်ချက်။ ။ ဂျပန်ကားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ အလွန်အကျွံ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားစေတဲ့ စကားလုံးတွေပြောတာ၊ အုပ်စုလိုက်ပြေးကြလွှားကြတာ၊ တချို့နေရာတွေမှာ စကားပြောရင် ပိုပြီးအော်သလိုလို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုး စတိုင်လုပ်ပြောတတ်တာ၊ Anime character လိုမျိုးရိုက်ထားတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံပေါတောတောဆန်ပြီး နားမလည်နိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်… ဒါတွေကို နားလည်ထားရပါမယ်..(တချို့လူတွေက ဂျပန်ကားကို အဲလိုမျိုးတွေကြောင့်မကြိုက်တာပါ… ဒါပေမဲ့ ဒါကလဲ သူတို့လူမျိုးရဲ့ Culture တစ်မျိုးလေ…)
(Sawada Shin + Yamaguchi Kumiko)
ဒီစုံတွဲက တကယ်တော့ ချစ်သူရည်းစားမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး… သူတို့က ဆရာမနဲ့ တပည့်ပါ… ဆရာမက သူ့တပည့်ကို လုံးဝစိတ်မ၀င်စားသလို သူ့တပည့်က သူ့ကိုချစ်နေမှန်းလဲ ကားပြီးတဲ့အထိမသိသွားတာက ပရိတ်သတ်တွေကို အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး ခိုးလိုးခုလု ကလိကလိဖြစ်စေတာပါ… မဗေဒါအတွက်ကတော့ နောက်ဆက်တွဲကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပုံဖော်ပြီး အတွေးထဲ ဇွတ်အတင်းသဘောတူနေတော့တာပါပဲ…
Shirokin လို့ခေါ်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ဘယ်ဆရာမှ မနိုင်တဲ့ 3-D အတန်းကို အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ ဆရာမ Yamaguchi Kumiko ကို အဲဒိအတန်းရဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် Sawada Shin က စမြင်ကတည်းက ဒီဆရာမဟာထူးခြားမှန်းသိလို့ စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ…
သူတို့အတန်းသားတွေ ဆရာမကို မျိုးစုံအနိုင်ကျင့် နှိပ်စက် ခြောက်လှန့်ကြပင်မဲ့ ဘယ်လိုမှ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဒီဆရာမဟာနောက်ဆုံးမှာ အတန်းသားတွေအားလုံးဘက်ကရပ်တည်ပေးပြီး တပည့်တွေချစ်တဲ့ ဆရာမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… အထူးသဖြင့်တော့ တခြားသူတွေနဲ့ မတူတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်တဲ့ Shin ပေါ့… ဆရာမက တခြားဆရာတွေနဲ့ မတူဆို သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က သူမဟာ Yakuza ဂိုဏ်းချုပ်ရဲ့ မြေးဖြစ်ပြီး လူမိုက်တွေကတောင် လေးစားရတဲ့ ဆက်ခံသူလဲ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
ဒီဇာတ်ကားမှာ Shin က ဆရာမကို ချစ်တယ်ဆိုတာကို မသိမသာလေးပဲပြခဲ့တာပါ… သူ့ဆရာမကို အိမ်ကပေးစားတဲ့သူနဲ့ သွားတွေ့တဲ့နေ့မှာ သူတို့တပည့်တွေ တပြုံကြီးဟိုဘက်စားပွဲကနေ လှမ်းနောက်နေတာ… ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေက ပုံမှန်ပဲ ဆရာမကို နောက်နေတဲ့အချိန်မှာ… သူက ဆရာမကိုကြည့်ပြီး ပေးစားမဲ့ယောကျာင်္းရှေ့မှာ တလွဲတွေလုပ်တာကို ရှက်လဲရှက် ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာလဲ ဒီတွေ့ဆုံပွဲ မအောင်မြင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြတာတို့… နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာမကို အတိုက်အခံမျိုးစုံက ကျောင်းထွက်အောင်လုပ်တော့ တပည့်တွေအားလုံးထဲမှာ သူကအဆိုးဆုံးတားဆီးတာတို့… နောက်ဆုံးဆရာမအိမ်အထိတောင်လိုက်လာပြီး… သူ့ဆရာမရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပထမဆုံးသိခဲ့တဲ့ တပည့်ဟာသူပဲပေါ့… ဇာတ်လမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးအပိုင်း နောက်ဆုံးခန်းရောက်မှ ဆရာမကို ချစ်တဲ့စာရင်းထဲမှာ သူ့ကိုလဲ ထည့်လိုက်ဖို့ ကျန်တဲ့ Love rival တွေကိုပြောလိုက်တာကို ပရိတ်သတ်ကိုပြလိုက်တော့ ရင်ထဲပိုသေချာပြီး အောင့်သက်သက်နဲ့ပြီးသွားတယ်…
Shin နဲ့ သူတို့တပည့်တွေဆရာမကို ပေးထားတဲ့နာမည်ပြောင် Yankumi ဟာ ဆရာတပည့်ဆိုပေမဲ့ အသက် ၅နှစ်ပဲကွာတာပါ… Shin တို့ Batch က Yankumi ဆရာမပေါက်စ စစဖြစ်ချင်းသင်ရတဲ့ အတန်းပေါ့… ဆရာမက အသက် ၂၃နှစ်… Shin က အသက် ၁၈ နှစ်… ပြီးတော့ Shin နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Matsumoto Jun ကို အဲဒိကားထဲမှာ ဇာတ်ကောင်နဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်တယ်… Cool အရမ်းဖြစ်သလို သူ့ဆရာမကို ကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ရှေ့မှာတော့ ဆရာမကို ဂရုမစိုက်သလိုနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တိတ်တိတ်လေးပြုံးတဲ့ အပြုံးတွေသရုပ်ဆောင်တာ အရမ်းတော်တယ်… ဆရာမကို စိတ်ထဲက လေးလဲလေးစားသလို ချစ်သူလိုလဲချစ်နေတဲ့ အကြည့်မျိုးတွေ သရုပ်ဆောင်တာအရမ်းတော်တယ်…
Gogusen က ပထမတစ်ကားအောင်မြင်တော့ နောက်ထပ် ၂ကားထပ်ထွက်တယ်… ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားထဲမှာ Shin လိုမျိုးဆရာမကို စိတ်ဝင်စားတာမျိုးမပါတော့ဘူး… (အမြဲပါနေလဲ မကောင်းတော့ဘူးလေ)… နောက်ကားတွေမှာ Shin များလူကြီးဖြစ်ပြီးပြန်လာမလားလို့ မျှော်လင့်မိတယ်… ဒါပေမဲ့ မပါတော့ဘူး… ဒါပေမဲ့ ၀မ်းသားစရာတစ်ခုကတော့ Manga (Japan ကာတွန်းစာအုပ်) ထဲမှာတော့ Shin က အကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး အလုပ်အကိုင်အတည်တကျနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆရာမနဲ့ပြန်တွေ့ပြီး ချစ်ရေးဆိုကာ သူတို့ ၂ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်လို့ပါတယ်… ဘာလို့များ ရုပ်ရှင်မှာမရိုက်တော့တာလဲမသိဘူး… ဖြစ်နိုင်တာက Matsumoto Jun က ဇာတ်ကားဆက်ရိုက်ကူးဖို့လက်မခံတော့တာများလား…. ဟင်း (သက်ပြင်းချသံ)… ဘာပဲပြောပြော သူတို့ အတွဲဟာ မဗေဒါအကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်စုံတွဲနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး သရုပ်ဆောင် ၂ဦးအနေနဲ့ စိတ်ထဲစွဲနေပါတယ်… ခုတောင် ရေးနေရင်းနဲ့ကို စိတ်ထဲ ခုလုခုလုဖြစ်လာသလို အဲဒိကားကိုပြန်ကြည့်ချင်လာပြီ…
အောက်က MV လေးတွေကြည့်ပြီးတောင် ရင်ခုန်နေရတယ်…
(Knight Tenjo + Riiko Izawa)
ဒီကားကလဲ ပရိတ်သတ်ရင်ကို စို့နစ်ပြီးကျန်စေတဲ့ ကားတစ်ကားဖြစ်မယ်လို့ မဗေဒါထင်တယ်… ဒီကားလေးကို ၂၀၀၈ တုန်းက ညဘက် အလုပ်ထဲမှာထိုင်ကြည့်ပြီး အဆုံးပိုင်းမှာ ငိုလိုက်ရတာ… ကိုယ်ငိုတာ လူမိမှာစိုးလို့ ဘေးဘီနောက် လှည့်ကြည့်တော့မှ အလုပ်ထဲက စလုံးကောင်ကလဲ နောက်မှာ ရပ်ကြည့်ပြီး မျက်ရည်တွေဝိုင်းနေတာတွေ့ရတယ်… (အဲလို အလုပ်များကြတာ…)…
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းလေးကိုလဲ ဒီနေရာမှာ တစ်ခါရေးပြီးပါပြီ… ...
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကားတွေအကြောင်းပြောရရင် ဘယ်တော့မှ မောတယ်မရှိပါဘူး…
ဒီဇာတ်ကားမှာလဲ အရပ်အမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ စက်ရုပ် Knight ပုံစံသရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Hayami Mokomichi ဟာ အဲဒိဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး ဘယ်သူမှ အစားထိုးသရုပ်ဆောင်လို့ မရလောက်ပါဘူး… စက်ရုပ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးကို လူလိုမျိုး ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ချစ်လာခဲ့တယ်…
ပိုင်ရှင်ကောင်မလေးကလဲ အစကတော့ လူကောင်လေးဖြစ်တဲ့ သူမ သူဋ္ဌေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးမှ… သူမအပေါ်အရမ်းအနစ်နာခံပြီး ချစ်တဲ့ စက်ရုပ်လေးကို သံယောဇဉ်တွယ်ပြီး ချစ်သွားတဲ့အခါ သူမရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ အစစအရာရာပြည့်စုံတဲ့ သူမနဲ့အတူတူ အသက်ကြီးပြီး အဖော်ပြုနိုင်တဲ့ လူသူဋ္ဌေးလေးကိုတောင် စွန့်ပြီး စက်ရုပ်လေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ လူနဲ့စက်ရုပ်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့တူတူအသက်ကြီးမလာနိုင်ဘူး သားသမီးမရနိုင်ဘူး စသည်ဖြင့်ပေါ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး (အစကတည်းက မဖြစ်နိုင်တာစထားပြီးပြီပဲ ပေးပေါင်းလိုက်ပြီးနေတာ)… အဆွေးဇာတ်လေးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းတာပေါ့…
ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းအသိမ်းကိုကျတော့ အစောက ကျောင်းသားဇာတ်လမ်း Gogusen လို အတင်းကာရောညားစေချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူး.. သူ့ဇာတ်သိမ်းကို လက်ခံတယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူမင်းသားကလဲ သူ့ဇာတ်ကောင်နဲ့သူကောင်းတဲ့သူပဲ… ပြောရမယ်ဆို နည်းနည်းတောင်နစ်နာသေးတယ်… ဘာမဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့ကိုပစ်ပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ စက်ရုပ်နောက်လိုက်သွားပြီးမှ စက်ရုပ်ကပြန်ပေးမှ ရတဲ့ဘ၀… ဒီတော့ ဇာတ်သိမ်းလေးအရ ကောင်မလေးက လူမင်းသားနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပင်မဲ့ မရှိတော့တဲ့စက်ရုပ်လေးကိုလဲ စိတ်ထဲမှာ ချစ်ပြီးနေနေတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေးက စို့နစ်စရာကောင်းပင်မဲ့ အကောင်းဆုံးအပြီးသတ်တယ်လို့ ခံစားရတယ်…
ဒီကားထဲက Knight နဲ့ Riiko စုံတွဲဇာတ်ကောင်လေးကလဲ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အချိန်ပြည့်စိတ်ထဲမှာ ရင်ခုန်ကြည်နူးစို့နစ်မှုတွေကိုပေးတယ်…
Hotaru no Hikari (Takano Seiichi (aka) Bucho + Amemiya Hotaru)
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း ဘလော့ပေါ်မှာ မရေးဖူးပင်မဲ့ ရေးချင်ခဲ့တာကြာပြီ… ဇာတ်ကားရဲ့ အချစ်ဖြစ်တည်လာမှုက နှေးတယ်… သူတို့က သံယောဇဉ်ကနေ ချစ်သွားတဲ့ပုံမျိုးဆိုတော့ သိပ်ပြီး Romantic ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကို မပြထားဘူး… ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းအရ တချို့အရာတွေ အပိုတွေကိုလျှောက်ပြနေတတ်ပြီး တချို့အကြောင်းအရာတွေက ထပ်နေတတ်တယ်… မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒီဇာတ်ကားထဲက Bucho (manager) နဲ့ Hotaru ဇာတ်ကောင်ရဲ့ကြားက သံယောဇဉ်ကဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်ကို သဘောကျသလို အဲဒိအတွဲကိုလဲ စိတ်ထဲက ကြိုက်တယ်…
Amemiya Hotaru ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ရုံးမှာဆိုရင် အလုပ်ကြိုးစားပြီး အဆင့်အတန်းမှီမှီဝတ်တတ်စားတတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ စေ့စပ်သေချာတဲ့မိန်းကလေးလို့ အလုပ်ကလူတွေက သတ်မှတ်ထားတယ်… ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့ အိမ်မှာနေတဲ့ပုံစံဟာ ရုံးကပုံစံနဲ့ တခြားစီကွာဟနေတယ်… သူမဟာ အိမ်က သစ်သားကပြင်လေးပေါ်မှာ ဘောင်းဘီစုတ်ကိုဝတ် သတင်းစားတွေခြုံပြီး လှဲလှောင်းနေတတ်တဲ့ အပျင်းမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်… အိမ်ရှင်းဖို့ဝေလာဝေးစွ… အရာအားလုံးကို သူလှဲလှောင်းနေတဲ့နေရာရဲ့ လက်တကမ်းမှာထားပြီး ဖွထားတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်… သူ့အကျင့်တွေအားလုံးကို သိသူကတော့ နောက်မှ သူ့အိမ်ကိုပြောင်းလာပြီး တူတူနေဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ အထက်အရာရှိ မန်နေဂျာ ပဲဖြစ်တယ်… (သူမနေနေတဲ့အိမ်က မန်နေဂျာအဖေပိုင်တဲ့အိမ်ကို ငှားထားတာ.. မန်နေဂျာက သူ့မိန်းမနဲ့ ကွားရှင်းပြီး အဲဒိအိမ်ကိုပြောင်းလာတာ)
မန်နေဂျာ Takano (သူမအခေါ် Bucho) လဲ အလုပ်ထဲကပုံစံနဲ့ အိမ်မှာနေတဲ့ပုံစံ အရမ်းကွားခြားတာ သိတော့ အစပိုင်းမှာ အရမ်းအံ့သြပင်မဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ ရုံးကလူတွေရှေ့မှာ သူတို့ ၂ယောက်တူတူနေတာ မသိအောင် ဖုံးဖိရင်း အကျင့်ရသွားတယ်…
Hotaru က ရုံးက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကြိုက်နေတယ်… အဲဒိကောင်လေးနဲ့ နီးစပ်ဖို့ကို မန်နေဂျာက အကူအညီတွေပေးခဲ့ရတယ်… သူဟာ အိမ်မှာညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နဲ့ အပျင်းကြီးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာကို မသိအောင်ရော သူတို့ ၂ယောက်ဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တူတူနေတယ်ဆိုတာကို အဲဒိကောင်လေးမသိအောင်ရော ကူညီပေးခဲ့တယ်… အတိုချုံးပြောရရင် အဲကောင်လေးကလဲ Hotaru ကို ပြန်ချစ်လို့ နောက်ဆုံး Hotaru က သူ့ရည်းစားနဲ့ တူတူနေမယ်ဆိုပြီး အိမ်ပြောင်းသွားတယ်…
အချစ်ဆိုတာ ဝေးသွားမှ ပိုသိလာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း Bucho အတွက် သိသာလာတယ်… Hotaru မှ သူ့ရည်းစားနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတဲ့ သိစိတ်ကအတွေးနဲ့အတူ မသိစိတ်က Hotaru ကို သတိရနေတယ်… တဖက်က Hotaru အနေနဲ့လဲ သူ့ရည်းစားနဲ့ တူတူနေချိန်မှာ Bucho နဲ့ နေသလို အပျင်းစတိုင်မနေရပဲ မိန်းမဆန်ဆန် ပြုစုနေရတော့ အစပိုင်းပဲပျော်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျဉ်းကျပ်လာတယ်… သူဘယ်လိုမိန်းမမျိုးလဲဆိုတာ သူ့ရည်းစားကို သိစေချင်သလို သိသွားလို့သူ့ကိုလက်မခံနိုင်မှာလဲစိုးတယ်… အဲဒိအချိန်တွေမှာပဲ သူ့ရည်းစားက သိသွားပြီး သူမကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်… ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းပြန်ရှင်းတော့ သူ့ရည်းစားက Hotaru အပျင်းမဖြစ်လို့ ဖြတ်တာမဟုတ်ပဲ… Hotaru နှလုံးသားထဲမှာ Bucho ကို ချစ်နေတာ… Bucho နဲ့ စကားပြောရင် Hotaru ဟာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ နေထိုင်နိုင်တာတွေကိုကြည့်ပြီး Hotaru ၊ Bucho ကို မသိစိတ်ထဲက သံယောဇဉ်တွယ်နေတာသိလို့ ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်…
Bucho အချစ်ကို သိသိသာသာ စပြတဲ့အခန်းကတော့ ဇာတ်ကားနည်းနည်းနောက်ပိုင်းလောက်ရောက်မှ Hotaru အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုသွားရင် မမျှော်လင့်ပဲ ဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာ ၁ညပိတ်မိသွားတယ်… နောက်နေ့မနက်မှာ Bucho ကိုယ်တိုင်အရမ်းစိတ်ပူလို့ ရုံးကလူတွေနဲ့ လိုက်ရှာရင်း Hotaru ကိုတွေ့တော့ ရုံးကလူတွေရှေ့မှာ ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲ ပြေးဖက်တဲ့အခန်းလေးက(Video ထဲမှာ 2:40 က အခန်းပေါ့) မဗေဒါကို “ခုမှပဲ စောင့်နေတဲ့ အခန်းကလာတော့တယ်” ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပြုံးမိတယ်… ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ သူတို့ ၂ယောက်အတွက် Romantic ဖြစ်တဲ့အခန်းက နည်းလွန်းတယ်…
ဇာတ်လမ်းအရ Bucho character ဟာ တစ်ခုလပ်ဖြစ်သလို အသက် ၄၁ နှစ် ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရည်ရှိပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်… Hotaru character က အသက် ၂၇ နှစ်… အသက်ကလဲ ကွာလွန်းတယ်… ဒါပေမဲ့ Bucho တစ်ယောက်ပဲ Hotaru ရဲ့ အကျင့်တွေအားလုံးကို နားလည်လက်ခံပေးနိုင်သလို … Hotaru အတွက်လဲ ဟန်ဆောင်စရာမလိုပဲ အရှိအတိုင်းနေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်တာ Bucho တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်… သူတို့ ၂ယောက်စုံတွဲက လိုက်ဖက်တယ်လို့ ခံစားရတယ်… အချစ်ဖြစ်လာတာ နှေးတယ်ဆိုပင်မဲ့ ဘယ်တော့ကြိုက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းတယ်… ပြီးတော့ ရီရတယ်… အထူးသဖြင့် Hotaru no Hikari part2က ပိုရီရတယ်…
ဒီကားထဲက စုံတွဲCharacter ကလဲ မဗေဒါ အခါခါထပ်ကြည့်ချင်တဲ့ စုံတွဲထဲမှာပါတယ်… ကဲ ဇာတ်ကားအမြည်းလေးကြည့်သွားနော်…
နောက်ဆုံးပိတ် မဗေဒါအကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်စုံတွဲအနေနဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကောင်စုံတွဲတွေကိုပြောပြမယ်…
Who are you? (Cha Seung Hyo + Son Young In)
ဒီကားမှာ Cha Seung Hyo ဆိုတဲ့ မင်းသား Character က အလွန်သွေးအေးတဲ့သူ လက်အောက်ငယ်သားတွေဆိုလဲ ခင်ခင်မင်မင်မရှိဘူး… အသန့်သိပ်ကြိုက်တယ်… စီးပွားပြိုင်ဘက်ချင်းဆိုလဲ လုံးဝ မညှာဘူး… လူမုန်းများတယ်… သူ ကားအက်စီဒင့်ဖြစ်ပြီးသေခါနီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Son Young In ရဲ့ အဖေ၀ိညာဉ်က မကျွတ်ခင် ၄၉ရက်အတွင်း သူ့ကိုယ်ထဲကို ၁ရက်မှာ ၃နာရီဝင်စီးပြီး သူ့သမီးကို မဖြည့်စီးပေးခဲ့သမျှတွေကို မင်းသားပိုက်ဆံတွေနဲ့ ဖြည့်စီးပေးတယ်… မင်းသားက မင်းသမီးအဖေ၀င်ပူနေတုန်းတော့ အရမ်းကောင်းနေပြီး သူ့စိတ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ မင်းသမီးကိုလဲ မမှတ်မိဘူး ပြီးတော့ မညှာမတာလဲ ဆက်ဆံတယ်… နောက်ပိုင်းမှ သူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ အဲဒိ ၀ိဥာဉ်ကို မြင်ရလာပြီးသိတယ်…
ပထမပိုင်းတော့ ၀ိဥာဉ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့… နောက်ပိုင်း ကောင်မလေးကို သံယောဇဉ်တွယ်လာတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ အသန့်သိပ်ကြိုက်တဲ့ အကျင့်တောင် ကောင်မလေးအတွက်ပြောင်းလဲလာတယ်… ဒီကားမှာ သူနဲ့ ကောင်မလေးက အသက်အရမ်းကွာတယ်… ၁၂ နှစ်… အပြင်မှာလဲ တကယ် ၁၂နှစ်ကွာတယ်… (ဒါပေမဲ့ မင်းသားက နုတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်)…
တစ်ကောင်ကြွတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး Son Young In ကို တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး ပညာရှင် သူဋ္ဌေး Cha Seung Hyo လိုအပ်သလို… အထီးကျန်ဆန်တဲ့ ဘ၀မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ Cha Seung Hyo အတွက်လဲ နွေးထွေးတဲ့ အချစ်တွေပေးနိုင်တဲ့ သနားစရာ တစ်ကောင်ကြွက်မလေး Son Young In ကို လိုအပ်လာတယ်… အဲဒိ စုံတွဲလေးကို အဲဒါကြောင့် သဘောကျတယ်… နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အဖေ မပူးနေပဲနဲ့တောင် တဖြည်းဖြည်း Cha Seung Hyo က Young In ကို သ၀န်တိုလာတာ ဂရုစိုက်လာတာက ကလိကလိနဲ့ အသည်းယားဖို့ကောင်းတယ်…
မင်းသား Yoon Kye Sang က သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်… ကြည့်ဖူးသမျှသူ့ကားတိုင်းမှာ သူ့ကို သဘောကျတယ်… ဒီကားကြည့်ပြီး သူ့ကိုတော်တော်လေး ရူးသွပ်လိုက်သေးတယ်… မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်နော်…
Dal-ja’s Spring (Kang Tae Bong + Oh Dal Ja)
ဒီကားမှာလဲ အသက် ၃၃နှစ် အူဒယ်ဂျားဆိုတဲ့ မိန်းမရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို အစပိုင်းတော့ ပိုက်ဆံရလို့ ကူညီခဲ့ပင်မဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သနားပြီး သံယောဇဉ်ရှိကာ ချစ်မိသွားတဲ့ ၂၇ နှစ်အရွယ် ခန်ထယ်ဗုံး ဆိုတဲ့ ကောင်လေး အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့…
ဒီဒယ်ဂျားခံစားရသမျှတွေအားလုံးကို စလယ်ဆုံးနားလည်ပြီး ချစ်သလို… ခန်ထယ်ဗုံးလို ခေါင်းမာပြီး ကိုယ်ထင်ရာလုပ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ မမကလဲ ဒယ်ဂျားတစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်…
သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ Character က Chemistry ရှိသလို ကြည့်လို့လဲကောင်းပါတယ်… ကြည့်လိုက်ရင် အဲဒိ ခန်ထယ်ဗုံးနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Lee Ming Kee ကို ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ ထင်ချင်ထင်မယ်… ဒါပေမဲ့ သူဟာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူပီပီ ကျွန်မစိတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်… ဒီစုံတွဲကလဲ ကျွန်မစိတ်ကို စိုးမိုးနိုင်တဲ့ အတွဲပဲ… ဒီကားအစဆုံးကြည့်ပြီးတာ ၂ကြိမ်ရှိပြီ… အကြမ်းအမြန်ရှပ်ကြည့်တာက ၁ခါ… Youtube က MV တွေပြန်ကြည့်ဖြစ်တာတော့ ရေတွက်လို့ မရတော့ဘူး… ကြည့်လိုက်နော်…
All About Eve (Yun Hyong Chul ,ကျွန်မတို့အခေါ် “ဒါရိုက်တာရင်” + Jin Sun Mi)
အထူးတလည်ပြောနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်… ဒီကားဟာ မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်တုန်းက “ဆည်းဆာရင်ခုန်သံ” ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ပြခဲ့တုန်းက မြန်မာပြည်တလွှားပရိတ်သတ်ရင်ကို စွဲညိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်…
ဒီကားရဲ့ စုံတွဲကို ကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ (ဘက်လိုက်တယ်ပဲပြောပြော) မင်းသားသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ Character ဟာ အပြင်မှာ မရှိနိုင်တဲ့ အလွန်မှ ပြည့်စုံ ယောကျာင်္းပီသတဲ့ Character ပဲဖြစ်ပါတယ်… မိန်းကလေးတိုင်းက အဲဒိကားကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဖူးစာရှင်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဆင့်ကို မြှင့်တင်လိုက်ချင်အောင်ကို ဇာတ်ကောင်စရိုက်က ကောင်းလွန်းနေပါတယ်… အဲဒိဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို နာမည်ကျော်မင်းသားချော Jung Dong Gun က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဆောင်ပြသွားနိုင်တဲ့အပြင် မင်းသမီး Chae Rim ရဲ့ ဆန်းမီ ဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဆောင်သွားတာကလဲ အပိုအလိုမရှိပါပဲ…
ဒီဇာတ်ကောင်စုံတွဲကို ဒီသရုပ်ဆောင်တွေထည့်ထားတာ အံဝင်ဂွင်ကျအပိုအလိုမရှိ ကောင်းလှပါတယ်… အဲဒိကားကို မဗေဒါပြန်ကြည့်တာ ၅ ခါ ၆ ခါထပ်မနည်းပါဘူး… ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်လဲ ပထမတစ်ခေါက်ရင်ခုန်စရာအခန်းက နောက်တစ်ခေါက်လဲ ရင်ခုန်အောင် သဘောကျအောင် ထပ်လုပ်နိုင်နေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်… ဒီကားရဲ့ နောက်ထူးခြားချက်က ဇာတ်ဝင်တေးတွေကလဲ ကောင်းပါတယ်… ကဲ ဒါဆိုရင် သိလိုက်တော့….
Secret Garden (Kim Joo-Won + Gil Ra Im)
ဒီကားအကြောင်းကိုတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ ရေးလွန်းလို့ Label တောင် သပ်သပ်ခွဲထားရတဲ့ အထိပါပဲ… ဒီကားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်…
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောတော့ပါဘူး… ဒီစုံတွဲကို အရမ်းကြိုက်တယ်.. ဇာတ်ကောင်ကိုလဲကြိုက်တယ်… သရုပ်ဆောင် ၂ယောက်လုံးကိုလဲ ကြိုက်တယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ၂ယောက်လုံး တူတူဝင်သရုပ်ဆောင်သလို သရုပ်ဆောင်အားကောင်းပြီး ဇာတ်ကောင်စရိုက်ပီပြင်တဲ့အတွက် ရင်ခုန်တယ်…
Posted by mabaydar at 10:47 PM 12 comments :
Labels: Drama , Secret Garden
Posted by mabaydar at 5:43 PM5comments :